एटिएम कार्ड प्रयोग भएका बैंकका सीइओहरु र नेप्सका सीइओ क्षेत्री माथी अनुसन्धान किन नगर्ने ? - Aathikbazarnews.com एटिएम कार्ड प्रयोग भएका बैंकका सीइओहरु र नेप्सका सीइओ क्षेत्री माथी अनुसन्धान किन नगर्ने ? -
नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)द्वारा गल्ती स्वीकार
चिनीयाँ ह्याकहरुले विश्वका अधिकाशं देशमा यस्तो एटिएम ह्याक गरि पैसा चोरी गरेको घटना दिन प्रतिदिन आएका छन् । यस्तो नेपालमा होला भन्ने ज्ञान बैंकका सीइओ र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का मालिकहरुलाई हुनु जरुरी हुन्छ की हुँदैन ? त्यसकारण नेपाल प्रहरीले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का सीइओ क्षेत्री र एटिएम कार्ड प्रयोग भएका बैंकहरुका सीइओहरु माथि तत्कालै अनुसन्धान गरिनु जरुरी देखिन्छ । स्मरणीय के छ भने नेप्सको आफ्नै अधिकारिक अनलाइन समेत सेक्युर देखिदैन ।
एटिएममा बैंकहरुको ठगीः राष्ट्र बैंक बेखबर ?
यो विश्वका देशमा राम्रा राम्रा सेक्यूरेटी सिस्टम प्रयोग गरिएका सर्वरहरुबाट सञ्चालन गरिएका इन्टरनेटबाट चल्दैन अथवा खुल्दैन । सरकारले यस्तो सम्वेदनशिल कामको जिम्मेवारी सरकारी निकायबाट गरिनु पर्दछ । एउटा व्यक्ति विशेषबाट सञ्चालित संस्थाबाट गरिनु हुँदैन । सचेत भया ।
यो पनि हेर्नुहोस् उसैले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा आफ्नो गल्ती नेप्सले स्वीकार गरेको छ ।
प्राइम कर्मशियल बैंकद्वारा राष्ट्र बैंकलाई चुनौती निक्षेप भन्दा कर्जा बढि सिडी रेसियो डरलाग्दोः राष्ट्र बैंक बेखबर ?
प्रुडेन्सियल इन्स्याेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी महर्जनकाे राजीनामा स्वीकृत
जगदम्बाको अर्को फड्को : तेस्रो मुलुकमा जस्तापाता निर्यात सुरु